Dadka Dunida Caanka Ah Ee Aan Rumaysnayn Maydhashada | Gaaroodi News
Dadka Dunida Caanka Ah Ee Aan Rumaysnayn Maydhashada
July 31, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Waxaa caadiyan laga fishaa dadka caanka ah iyo kuwa saamaynta ku dhex leh bulshada inay yihiin dad dhisan, oo muuqaalkoodu uu soo jiidasho leeyahay iyo qiima-gaar ah. Tallaabada ugu muhiimsan qofkaasi ayaa ka bilaabata nadaafaddiisa marka uu qubaysanayo oo uu jirkiisa mayrayo, ka hor inta uusan maanka gelin iscarfin, saliid marsasho, timaha oo la nafaqeeyo, kabaha oo la dhalaaliyo ama dharka oo la feereeyaba.
Hasayeeshee dhammaan dadka caanka ah oo dhami ma wada ahan dad wada jecel qubayska iyo jirka oo la dhaqo. Indhaqabad ayey leeyihiin waana dharka ay xiran yihiin, ama sida ay tinta u jartaan.
Dadkaas caanka ah waxa ay isugu jiraan jilaayaal, heesaa, orodyahanno iyo siyaasiyiin kuwaas oo si cad u qirtay in aanay maalinwalba qubaysan sababtoo ah qubayskoodu mid joogta ah maba aha.
Dadka caanka ah sida Zac Efron, Julia Roberts, Shia Labeouf, Kristen Stewart, John Depp iyoLeonardo Dicaprio ayaa ka mid ah liis aad layaabi kartid, hasayeeshee qubayska qofka iyo waxa uu sameeyo ma ahan wax isku xiran, balse waxa uu jecelyahay iyo hab dhaqankiisa ayaa muhiim ah.
Qaar ayaa qubaysta balse marwalba qasab ma ahan, oo haddii aanay waqti hayn waxa ay joogi karaan todobaad iyagoon qubaysan. Waxaa laga yaabaa inaad is tiraahdo malaha biyaha iyo saabuunta ayey yaraynayaan hasayeeshee sidaasi waa sida qubayska ay ka aaminsan yihiin. Waxaa jira dad badan oo caan ah oo aanan ka helin qubayska oo ay ka midka yihiin:
William Bradley Pitt waa jilaa caan ah iyo filim soo saare u dhashay waddanka Mareykanka, waxa uuna leeyahay shirkadda ugu wayn ee soo saarta filimada ee Plan B Entertainment.
Brad Pitt waa mid ka mid ah dadka ugu caansan Mareykanka ee ay warbaahintu ku tilmaanto inuu yahay nin soo jiidasho leh oo dunida oo dhanna laga qadariyo.
Walow uu ninkan ku guulaystay abaalmarinnada sida Golden Globe, the Primetime Emmy iyo the British Academy Film, awoodna waxa uu u leeyahay inuu hago oo uu jilo filimaanta, ayaa haddana aanay isku wanaagsanayn qubayska “waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad is tirtid, anigu ma hayo waqti aan ku qubaysto,” ayuu yiri.
Jilaayaasha kale ee kula jiray filimka Inglourious Basterds, sida Eli Roth ayey mar Shakabakadda People waxa ay ka soo xigatay inuu lahaa aabahaas lixda carruurta ah dhalay uu siinayay talo adag oo ku saabsan sida ay isu nadiifiyaan marka ay aflaamta duubayaan.
Roth ayaa laf ahaantiisa qiraya inuu qaatay talada Pitt uuna bilaabay inuu isku nadiifiyo waxyaabaha carruurta lagu nadiifiyo gaar ahaan marka uu mashquulka yahay oo uusan qubayska waqti u hayn.
Milena Markovna Kunis waa jilaa iyo soo saare, waxa ay jishay filimka Black Swan oo ay dunida magaca uga sameeyay kaas oo ay weliba ku heshay abaalmarinta Marcello Mastroianni Awar.
Gabadhan caanka ah ee aflaamta samaysa dhanka qubayska markii laga hadlo waa ay ka gaabsataa inay jawaab ka bixiso. Kaddib warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in aanay doonayn inay qubaysato ayaa Monica Padman daadihiyaha barnaamijka caanka ah ee Armchair Expert waxa ay waydiisay Kunis cidda bartay in aanay qubaysan waxaana ay ku jawaabtay, “Marka aanan haysan biyo kulul, xilligaas oo kale si joogta ah uma qubaysto.”
Kunis waxa ay dhashay laba carruur ah Wyatt oo 6 sanno jir ah iyo Dimitri oo 4 sanno jir ah kuwaas oo dhaxlay qubays la’aanta oo si joogta ah uma qubaystaan.
3: Ashton Kutcher
Christopher Ashton Kutcher waa jilaa, filamada sameeya iyo ganacsadaba kaas oo maalgashaday in ka badan 60 shirkadood oo ku kala yaal daafaha dunida oo ay ku jiraan kuwo uu saamiga ugu badan leeyahay sida Skype Foursquare, Airbnb, Path iyo Fab.com iyadoo lacagtiisana lagu qiyaasay $220million.
Kutcher waxaa u dhaxda jilaaga Mila Kunis oo sida xaaskiisa oo kale ayuusan wax muhiimad ah u arkin in maalinwalba la qubaysto. Waxa uu caddeeyay in qubaysku uusan ahayn wax lagu baashaalo mar uu wareysi siinayay barnaamijka Armchair Expert oo ay wada daadihiyaan Dax Shepard iyo Monica Poadman.
Kutcher waxa uu sheegay in maalinwalba uu mayro qaybo ka mid ah jirkiisa kuwaas oo uu u arko inay shiirayaan sida kilkilaha, xubnaha saxarada iyo midda kaadida.
Kutcher waxa ay isaga, xaaskiisa Kunis iyo labadooda canug ee yaryar ee Wyatt iyo Dimitri uga dhigan tahay in aanay aaminsanayn qubayska.
Robert Douglas Thomas Pattinson waa jilaa u dhashay Ingiriiska oo mar jariidadda TIME ay ku soo dartay inuu ka mid yahay 100-ka qof ee ugu saamaynta badan dunida, sidoo kalana waxa uu ka mid yahay liiska 100-ka qof ee caanka ah ee qaniga ah ee ay daabacday wargeyska Forbes.
Filimada Twilight, Bravo Otto iyo The King ayuu ku soo caanbaxay kuna muujiyay awooddiisa jilaanimo.
Pattinson ayaa waxaa lagu qiyaasaa inuu haysto hanti dhan $100 milyan.
Walow sidaas oo dhan uu dhaqaale u haysto Pattinson ayaa qubayska si kale u arka oo waxa uu ka mid ah liiska dadka caanka ah ee aanan danta ka lahayn qubayska.
Walow uu qiray in madaxa oo la dhaqo uusan wax wayn u arkayn haddana oraahdiisu waxa ay u muuqataa inuusan wax dan ah ka lahayn qubayska.
Naya Marie Rivera waa jilaa Ameerikaan ah, heesaa iyo model. Naya waxa ay si fiican u jishay Glee drama. Abaalmarinno badan ayey ku guulaysatay oo ay ku jiraan laba Grammy ah, SAG, ALMA halka ay qeybaha dambe soo gashay tartanka Brit.
Waa mid ka mid ah jilaayaasha ugu quruxda badan hasayeeshee ma jecla qubayska. Waxaa ay dhimatay 8-dii July 2020 hasayeeshee intii ay noolayd ayaa waxaa laga soo xigtay oo lagu shaaciyay taleefinka The View iyadoo leh maalinwalba ma qubaysto, oo waxaan qubaystaa bay tiri waagaas markii ay lagama maarmaan tahay.
“Aragti goonni ah ayaan ka haystaa qubayska oo waxaan u arkaa in dadka cadcad ay qubaystaan wax ka badan dadka kale. Waxay ila tahay in la qubaysto hal mar wax ka badan ama maalinwalba inay tahay wax ay sameeyaan dadka Cad,” Rivera ayaa laga soo xigtay inay tiri.